Taariikhda Hoteelka: Shelton Hotel New York wuxuu tilmaamayaa Jidka Mustaqbalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Taariikhda Hoteelka: Shelton Hotel New York wuxuu tilmaamayaa Jidka Mustaqbalka
Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Dabaqyo dhaadheer ayaa loo qushuucay sida 1924 Shelton Hotel ee Lexington Avenue iyo 49th Street, oo hadda ah New York Marriott East Side.
Dhaleeceeyayaashu waxay isku raaceen in muuqaalkeeda quruxda badan ee 35-dabaq ah iyo naqshaddiisa dib-u-dhac aan caadi ahayn ay tilmaamayso dariiqa mustaqbalka ee daaraha dhaadheer.
Shelton waxaa dhisay naqshadeeyaha hammiga leh James T. Lee, oo sidoo kale mas'uul ka ahaa laba guri oo raaxo leh: 998 Fifth Avenue ee 1912 iyo 740 Park Avenue ee 1930.
Wuxuu awoowe u ahaa Jacqueline Kennedy Onassis, oo dhashay Jacqueline Lee Bouvier.
Aragtida Mr. Lee waxay ahayd hudheel bachelor ah oo ka kooban 1,200 qol oo leh astaamo u eg naadi: barkadda dabaasha, maxkamadaha isboortiga, qolalka bilyaarka, solarium-ka iyo bukaan-jiifka. New York World 1923 -kii waxay sheegatay in Shelton uu noqon doono dhismaha ugu dheer dunida ee la deggan yahay.
Naqshadeeyaha, Arthur Loomis Harmon, wuxuu ku daboolay lebenkii jaalaha ah ee jaalaha ah oo aan joogto ahayn, oo u ruxmay sidii qarniyo jiray oo kale, wuxuuna ka soo qaatay Romanesque, Byzantine, Christian-kii hore, Lombard iyo qaabab kale. Laakiin kuwa dhaleeceeya ayaa aad ula dhacay in ay soo xasuusatay “ma jirin qaab dhismeed qeexan oo la soo dhaafay,” sida farshaxanka Hugh Ferriss uu ku sheegay The Christian Science Monitor 1923.
Shelton wuxuu ahaa mid ka mid ah dhismayaashii ugu horreeyey ee qaabkiisa ka qaatay sharci -sooneedka 1916 -kii kaas oo u baahnaa dib -u -dhac xagga sare ah si loo hubiyo iftiinka iyo hawo waddada. Taasi waxay aad uga duwan tahay huteelada dhaadheer ee boxy ee loogu talagalay kahor isbeddelka aagga, sida 1919 Hotel Pennsylvania, oo ka soo horjeedda Saldhigga Pennsylvania.
Helen Bullitt Lowry iyo William Carter Halbert ayaa ku yiri The New York Times 1924. Dhaleeceynta Lewis Mumford, oo caado ahaan ku bakhaylaysa ammaanta, ayaa ugu yeertay “buoyant, mobile, serene, sida Zeppelin hoosteeda cirka cad ”ee majaladda Commonweal 1926kii.
Naqshadda aragtida leh waxay leedahay xuduudo, si kastaba ha ahaatee, gudaha Mr. Harmon wuxuu u muuqdaa mid wax yar ka duwan hoteellada kale ee waawayn ee xilligan: saqafyo waaweyn oo waaweyn, qol cunto oo saqafkiisu saran yahay iyo barxado dheer oo gumaarka leh. Saddex meelood meel qolalka waxay lahaayeen qubaysyo la wadaago, taas oo ay qasab tahay inay dhalisay dhibaatooyin dabayaaqadii 1924, markii Shelton ay beddeshay siyaasaddeeda ragga oo keliya. Rugta sare waxay ku wareegsanayd barkadda dhulka hoostiisa, taas oo lagu sharraxay foorno polychromed ah.
Laga soo bilaabo 1925 ilaa 1929, Georgia O'Keeffe waxay ku noolayd dabaqa 30aad ee Hotel Shelton iyada iyo seygeeda, sawir qaade Alfred Stieglitz. Marka laga reebo huteelka Chelsea, way adag tahay in mid kale laga fikiro New York City huteel saamayn weyn ku yeeshay fanaanka, gaar ahaan hoteel laga yaabo inaadan waligaa maqal.
Dhismaha Lexington Avenue inta u dhaxaysa 48th iyo 49th Streets, 31-story, 1,200-room Shelton Hotel ayaa lagu amaanay inuu yahay dabaqada ugu dheer dunida markii la furay 1923. Ma ahayn oo kaliya mid dheer, waxay ahayd dhif iyo naadir-huteel deggan oo xarrago leh loogu talagalay ragga leh lugaha bowling -ka, miisaska bilyaariga, barxadaha squash -ka, dukaanka tima -jare iyo barkadda dabaasha.
Waxa aan marnaba shaki ku jirin muhiimadda dhismaha ee dhismaha. Iyada oo leh dhagaxa dhagaxa ah ee laba dabaq ah oo dhadhan leh iyo saddex dib-u-dhac oo leben ah oo ku sii fuulaya munaarad dhexe, Shelton wuxuu ahaa dhul-gariir. Dhaleeceyntu waxay u maleeyeen dhismihii ugu horreeyay ee si guul leh u soo koobaya shuruudaha aagagga 1916 ee qeexaya dib -u -dhacyo si looga ilaaliyo dabaqyada dhaadheer inay noqdaan indho -indheyn.
Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada waa mid ka mid ah dhismayaasha uu Shelton saameeyay. Dabayaaqadii 1977 -kii, naqdiyaha dhismaha New York Times Ada Louse Huxtable wuxuu ku dhawaaqay hoteelka "dhisme sare oo taariikhi ah New York."
O'Keeffe ma codsan karin istuudiyaha meel la isku raacsan yahay. Laga soo bilaabo hoygeeda hawada leh, waxay ku raaxaysatay indho -indhayn shimbir ah oo ku saabsan webiga iyo dalagga magaalada ee sii kordhaya ee dabaqyada dhaadheer. Sida Charles Demuth, Charles Sheeler iyo fannaaniintii kale ee xilligeedii, O'Keeffe waxaa soo jiitay dhismayaasha dhaadheer oo astaan ​​u ah casriyeynta magaalooyinka, mabda'a aasaasiga ah ee Qaddarinta, qaabkii farshaxanka casriga ahaa ee Dagaalkii Koowaad ee Adduunka ka dib oo u dabaaldegay muuqaalka cusub ee firfircoon ee Ameerika , warshadaha iyo dabaqyada dhaadheer.
Iyada oo ku xiran Shelton perch, O'Keeffe waxay abuurtay ugu yaraan 25 sawirro iyo sawirro dhismayaasha dhaadheer iyo muuqaalka magaalada. Waxaa ka mid ah sida ugu wanaagsan ee loo yaqaan "Radiator Building - Night, New York," oo ah dabbaaldeg heer sare ah oo ah dhismooyinka dhaadheer - iyo sumadda madow iyo dahabka ah ee Radiator American Dhisme hadda loo yaqaan Bryant Park Hotel.
Arthur Loomis Harmon, oo ah naqshadeeyaha Shelton, wuxuu sii waday inuu gacan ka geysto naqshadeynta Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada. (Wuxuu kaloo abuuray Allerton House, oo ah hoteel aad u sarreeya 1916 New York).
Laakiin Shelton caankeeda ayaa cirka sare toogtay ka dib markii uu booqday hoolka dabaasha ee 1926 -kii farshaxanka baxsadka ahaa ee Harry Houdini. Waxaa lagu shaabadeeyey sanduuq aan la karin, sanduuq u eg (in kasta oo uu ku qalabaysan yahay taleefan haddii xaalad degdeg ahi timaaddo), Houdini waxaa lagu daadiyey barkadda halkaas oo uu jiifay saacad iyo badh. Wuxuu ku soo baxay jadwalkii, isagoo daalay laakiin nool. "Qof walba ayaa sameyn kara," ayuu u sheegay New York Times.
In kasta oo taariikhdeeda midabka leh iyo u gaar ahaanshaha dhismaha, The Shelton, sida ay tahay ku dhowaad dhammaan hoteellada gaboobay ay ka soo reebeen. Badhtamihii 11-meeyadii waxaa jiray 1970 qof oo si buuxda u deggan. Sannadkii 1978kii waxay noqotay Halloorkii hantidii la xaday. Wuxuu kiraystay Stephen B. Jacobs si uu dib -u -qaabayn ugu sameeyo gudaha, isaga oo tirada qolalka ka dhigay 650.
Sannadkii 2007 waxaa lahaa Morgan Stanley oo qalliin ku wareejiyay Shirkadda Marriott.
Shirkadda dhismaha iyo injineernimada Superstructures waxay leedahay olole weyn oo dayactir dibadeed ah. Richard Moses, oo ah naqshadeeyaha mas'uulka ka ah mashruucan, ayaa sheegaya in faahfaahinta sare ee Mr. Harmon, oo ay ku jiraan madaxyada, maaskaro, griffins iyo gargoyles, ay guud ahaan yihiin kuwo sugan, in kasta oo dhowr ah oo ay si gaar ah u garaaceen walxaha la beddelay.
Md. Muuse wuxuu sheegay in Mr. Saamaynta, oo si dhib yar loo dareemi karo, ayaa ka muuqata heerka dhulka.
Gudaha asalka ah ee hoteelkii 1924 -kii wuxuu ku dhacay jajab, sida hoolka jaranjarada oo ku yaal dhinaca midig ee hoolka weyn. Maxkamadihii squash -ku waa tageen; meeshooda waxaa ku yaal qol jimicsi oo ku yaal dabaqa 35 -aad oo leh aragtiyo cajiib ah dhammaan wareega. Hoteelka ayaa qolal loogu magac daray Arthur Loomis Harmon, Alfred Stieglitz iyo Georgia O'Keeffe.